Mishiinnada Casriga ee Shiinaha ka caawiya in khadad caalami ah uu dhiso - BBC News Somali
Mishiinnada Casriga ee Shiinaha ka caawiya in khadad caalami ah uu dhiso
Image caption Muuqaalka Mishiinka dhismaha
Dalka Shiinaha ayaa samaysanaya qorshe uu khadad ugu xirayo qaaradaha Yurub iyo Afrika sidii uu ballaarin lahaa ganacsigiisa. Wuxuu adeegsanayaa aalado casri ah si uu shaqada dhisitaanka khadadka u dhamaystiro iyadoo aanan la luminaynin wakhti.
Qorshaha madaxweyanaha Shiinaha Xi Jinping ee uu shaaca ka qaaday sannadkii 2013-kii ayaa la doonayaa in Shiinaha uu ku xirto 70 dal oo caalamka ka tirsan iyadoo la adeegsanayo khadad mara dhulka iyo badda.
Dadka dhaleeceeya qorshahan ayaa sheegay in uu culays daymo oo baalaayin ah uu dusha ka saarayo dalalka saboolka ah.
Fulinta mashruuca khadadka waxaa laga fuliyay goobo ka tirsan dalka Shiinaha iyo caalamka halkaaso loo adeegsaday aalado casri ah oo si deg deg ah loogu fulinayo dhisitaanka waddooyinka, tareenada iyo buunddooyinka.
Image caption Khariidad Muujinaysa waddooyinka Shiinaha iyo kuwa UK
Su'aasha la is weydiinayo ayaa ah, sidee loo dhisi karaa khadadka tareenka iyadoo ay jiraan dhul buuralay ah oo caqabad ku noqonaya dhisitaanka waddooyinka?
Makiinadda loo yaaqaano SLJ ayaa awood u leh inay qaaddo ayna dhigto biraha lagu dhisayo bunddooyinka, dhagaxaanta iyo qalabka kale.
Sida ayay u shaqaysaa makiinaddan:
Image caption Mishiinka Buundooyinka
Waddooyinka dhulka hoostiisa laga qodo
Waxaa meel aan ka fogayn magaalada Hong Kong ee dalka Shiinaha ka socda qorshe lagu dhisayo waddo marta dhulka hoostiisa.
Marka si rasmi ah loo furo waddadaasi sannadka 2019-ka, saraakiisha dalkaasi waxay ku rajo wayn yihiin in waddadan ay ka qayb qaadan doonto sare u qaadidda tayada howlaha gaadiidka ee dalkaasi Shiinaha.
Dhisitaanka khad tareen
Khadka tareenka Mombasa ilaa Nairobi ee dalka Kenya ayaa si wayn indhaha caalamka u soo jiitay markii la dhamaystiray bishii May ee sannadkii 2017-kii.
Khadkani tareenka wuxuu gaarayaa 480 kilomitar, wuxuuna yahay waddada tareenka cusub ee ay Kenya yeelato tan iyo intii ay xoriyadda ka qaadatay Ingiriiska.
Boqolkiiba 90 waxaa maalgeliyay bangi laga leeyahay dalka Shiinaha.
Waana waddadii tareenka ugu horreysay uu Shiinaha ka dhiso meel dalkiisa ka baxsan iyadoo la isticmaalayo makiinado casri ah.
Haddaba sii loo fahmo sida khadka tareenka loo dhiso halka ka daawo.